January 2019 - Sawirrotv
Dab Xoogan oo Xalay ka Qarxay Suuqa Bakaaraha (SAWIRRO)
Dab xoogan ayaa xalay maqribkii waxa uu ka qarxay gudaha Suuqa Bakaaraha gaar ahaan aagga Bacadlaha. Dabkan oo la sheegay inuu ka dhashay Koronto ayaa kacay, kadib markii ay soo kala hooyaadeen dadkii Suuqa ku sugnaa oo ku ganacsan jiray. Dabka oo ah mid xoogan ayaa hadda ku sii fidaya qeybo cusub oo ka mid …
Siciid Cabdullaahi Dani oo ku Guulaystay Xilka Madaxweyne ee Maamulka Puntland
Doorashada xilka Madaxweynaha Puntland ee ka socotay Magaalada Garowe oo la isla gaaray wareegii saddexaad ayaa waxaa ku soo baxay Siciid C/laahi Dani oo ka guulaystay Musharaxii la tartamaayay ee Asad Cismaan. Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed, ayaa ku dhawaaqay Natiijada Doorashada Madaxweynaha cusub ee Puntland. Saciid C/llaahi Deni ayaa helay 35 Cod, halka …
Qaabkii loo Eryay Nicholas Haysom (VIDEO)
WasiirKA oo la hadlay laanta af-Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay in ergayga uu galay khaladaad badan, isla markaana uu wasiirka amniga gudaha uu ula dhaqmay sida mas’uul isaga ka amar qaata. Wakiilka la cayriyay ayaanan wali ka hadlin go’aanka culus ee Dowladda Federalka ee Soomaaliya ay ku soo rogtay